မော်နီကာ Sanchez | | ခွေးများ
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ငိုသံကိုကြားရတဲ့အခါ၊ အထူးသဖြင့်သူ့ကိုတစ်ယောက်တည်းထောင့်မှာမြင်ရရင်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်မိမှာသေချာတယ်။ သူ၌မကောင်းသောအကြံအစည်ရှိသည်ဟုငါတို့သိကြ၏ သူဘာတွေမှားနေတာလဲ၊ ခွေးကလေးကိုငိုတာကိုဘယ်လိုတားဆီးမလဲ။
Mundo Perros မှာမင်းကိုပေးမယ် သော့ မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းကအေးအေးဆေးဆေးပြန်နေနိုင်အောင်။
သူကသူ့အမေ၊ သူနှင့်သင်သုံးသောရက်များနှင့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းသူငိုနေသည်ကိုသင်ကြားရပေမည်။ ဒါဟာလုံးဝပုံမှန်ပါပဲ။ မကြာသေးမီအချိန်အထိသူသည်သူ၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာမိသားစုနှင့်အတူရှိနေခဲ့သည်၊ သူသည်သင့်ကိုယုံကြည်မှုမရမှီအနည်းငယ်လုံခြုံမှုရှိမည်ကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။
ကွဲကွာသောစိုးရိမ်စိတ် သင်တစ် ဦး တည်းရှိနေသည့်အခါဖြစ်ပေါ်သည်။ အဲဒါကိုရှောင်ရှားဖို့၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲဒါကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင့်သုံးဖို့၊ အရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေကိုကြာအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
နာကျင်မှု၊ ငတ်မွတ်မှု၊ ရေငတ်မှုသို့မဟုတ်အခြားအဆင်မပြေမှုများအတွက် - ငိုခြင်းသည်လူအားသူမကျန်းမာကြောင်းကိုပြောပြရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူကဆာလောင်နေတာ၊ ရေဆာတာပဲဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အစားအစာနဲ့ရေတွေကိုသူမလိုချင်ဘူးဆိုရင်၊ သင်ကသံသယတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ VET ကိုအမြန်သွားဖို့အချိန်တန်ပြီ။
သူကမင်းကို ဟုတ်တယ်၊ သူတို့လည်းငါတို့ကိုအသုံးချကြတယ်။ အဘယ်သို့! သူတို့ကအရမ်းပျက်စီးယိုယွင်းတဲ့အခါများသောအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုခုပါပဲ။ သူတို့ကိုချစ်ခင်တွယ်တာခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ သို့သော်သူတို့သည်တစ်နေ့လုံးကျွန်ုပ်တို့၏သောက်စရာများတွင်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသူတို့သိထားရမည်။
furry ဟာတိတ်ဆိတ်နေဖို့လှည့်ကွက်တစ်ခုပါ သူသည်သူနှင့်ကစားရန်တစ်နေ့တာအတွင်းတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေသည့်နာရီများ၏အားသာချက်ကိုယူပြီး။ အဘယ်သို့နှင့်အတူကစားရန်? သင်အနှစ်သက်ဆုံးနှင့်အတူ။ စျေးကွက်တွင်ခွေးများအတွက်ကစားစရာအမျိုးမျိုး - ဘောလုံးများ၊ ဝါးစားစရာများ၊ ဖရီစီဘီများ - သင်အကြိုက်ဆုံးကို ရွေးချယ်၍ ပျော်စရာပါ။
ဤနည်းအားဖြင့်, မင်းအိပ်ချင်နေပြီဆိုရင်မင်းရဲ့ခွေးကအရမ်းပင်ပန်းလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် cry ငိုတောင်မစဉ်းစားတော့ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » ခွေးတစ်ကောင်ကိုငိုတာကိုရပ်ပစ်နိုင်ပုံ